Alahady voalohany amin’ny Karemy – 22/02/2015 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Boky Jenezy (Jen 9, 8-15)
Ny faneken’Andriamanitra tamin’i Nôe, dia hanafaka azy amin’ny safo-drano.
Taorian’ny safo-drano Andriamanitra niteny tamin’i Nôe sy ny zanany niaraka taminy nanao hoe: “Izaho dia hanao fanekem-pihavanana aminareo sy amin’ny taranaka mandimby anareo, amin’ny zava-manana aina rehetra izay eo aminareo, na vorona, na biby fiompy, sy ny bibin’ny tany rehetra, hatramin’izay nivoaka avy tao an-tsambo fiara ka hatramin’ny biby rehetra ambonin’ny tany. Manao fanekem-pihavanana aminareo aho: tsy hisy levon’ny safo-drano intsony ny nofo rehetra, ary tsy hisy safo-drano handringana ny tany intsony”. Dia hoy Andriamanitra: “Ity no famantaran’ny fanekena nataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin’ny zava-manana aina rehetra izay ao aminareo, amin’ny taranaka ho avy rehetra. Nataoko eo amin’ny rahona ny avako, ka ho tonga famantaran’ny fanekena amiko, sy amin’ny tany. Ka rahefa hampiangona rahona ambonin’ny tany Aho, dia hiseho eo amin’ny rahona ny avana. Ka hotsarovako ny fanekena misy amiko sy aminareo mbamin’ny zava-manana aina rehetra, ny nofo rehetra, ka dia tsy hisy rano hanjary safo-drano mandringana ny nofo rehetra intsony”.
Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Piera Apôstôly (1Pi 3, 18-22)
Ny Batemy izay tenan’io tandindona io no amonjena anareo.
Ry kristianina havana, na i Kristy koa aza niaritra fahafatesana indray mandeha noho ny otantsika, dia Izy marina ho an’ny tsy marina mba hanolorany antsika amin’Andriamanitra, ka novonoina tamin’ny nofo Izy, fa novelomina tamin’ny fanahy. Ary tamin’io fanahy io ihany koa no nandehanany nitory teny tamin’ireo fanahy tao an-tranomaizina, dia ireo fanahy tsy nino fahiny, fony niandry ny fahari-pon’Andriamanitra tamin’ny andron’i Nôe, mandritra ny nandrafetana ny sambo fiara, izay nampidirana olona vitsy, dia valo monja, sy namonjena azy ireo tamin’ny rano. Ary amin’ny rano ihany koa ankehitriny, dia amin’ny Batemy izay tenan’io tandindona io, sy tsy fanadiovana ny loton’ny vatana, fa fangatahana fo tsara amin’Andriamanitra, no amonjena anareo noho ny nitsanganan’i Jesoa Kristy ho velona, dia ilay nandevona ny fahafatesana mba hahatonga antsika ho mpandova ny fiainana mandrakizay, ary efa lasa any an-danitra, mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra, eken’ny Anjely sy ny fahefana ary ny hery.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 1, 12-15)
Nalain’i Satana fanahy Izy, ary ny Anjely nanompo Azy.
Tamin’izany andro izany, i Jesoa dia nentin’ny Fanahy ho any an’efitra, ka nitoetra tany efapolo andro dia nalain’i Satana fanahy sy niara-nitoetra tamin’ny bibidia, ary ny Anjely nanompo Azy. Ary rahefa natao an-tranomaizina i Joany, dia nankany Galilea i Jesoa nitory ny Evanjelin’ny Fanjakan’Andriamanitra, ka nanao hoe: “Tonga ny fotoana, ary efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra; mibebaha ianareo ary minoa ny Evanjely”.
Alahady fahaefatra amin’ny Karemy – 15/03/2015 – Tenin’Andriamanitra
Alahady – 07/12/2014 – Tenin’Andriamanitra
Alahady – 04/01/2015 – Tenin’Andriamanitra